Indlela yokukhetha i-snowboard yeqalayo: iingcebiso, iimpawu zeebhodi. Iingcebiso zokukhetha ibhodi yebhola le-snowboard kubaqalayo.
Indlela yokukhetha i-snowboard yokuqala?
Iingcebiso zokukunceda ukhethe i-snowboard yeqalayo.
Kukho abaninzi abanomdla we-snowboarding. Le midlalo esebenzayo ayihlanganiswa kuphela nempilo, kodwa kunye nesitayela. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba uqale ukubonisa kwiintaba ezigutywe ngekhephu, kuya kufuneka ufunde izinto ezisisiseko zokuqhuba ukuqhuba ngokufanelekileyo, kunye nokukhetha i-snowboard efanelekileyo. Olu khetho kufuneka luthathwe lonke uxanduva kwaye, ukuba kunokwenzeka, funani iingcebiso kwi-snowboarder eneenkcukacha. Kodwa, ukuba akukho bantu abanjalo kwindawo yakho, sinikeza iingcebiso eziza kunceda umntu ozayo ukuba aqonde indlela yokufumana ibhodi elungileyo.
Imigaqo eyisiseko yokukhetha i-snowboard
Ngaphambi kokuba uthenge nantoni na, hlala uze wenze isigqibo sokuba uceba ukukhwela. Kukho iintlobo ezininzi zebhodi yebhola. Unako ukuphuma ngaphandle kweentaba okanye ukugxuma, ukuqhuba kwiinkalo okanye ukwenza konke kanye kanye, okubizwa ngokuthi "freeride". Ngako oko, umehluko omkhulu endleleni yokugibela, ekwahlula kwi-freeride, ukudweba (ukukhwela i-figure) kunye ne-freestyle (ukugibela i-speed-speed).
Iibhodi zeFerideide ziyaziwa kakhulu ngenxa yobungakanani babo kunye neendleko eziphantsi. Kodwa musa ukuqala kule nto kwaye ubalekele kwisitolo sokuqala.
Ukwahluke phakathi kwamabhodi e-snowboarding
Njengoko sithe satsho, iibhodi ziyahlukahluka ngokwemiqathango yazo. Makhe sizame ukulinganisa ngamnye wabo.
IBhodi ye Freestyle
Xa kuthelekiswa nabanye, eli bhodi likhanya kakhulu, ngoko umqalayo akayi kuba nzima ukwenza okokuqala. Iguquguquke kwaye ihambelana ngokupheleleyo, eya kukuvumela ukuba ufunde indlela yokuqhuba ngokufanelekileyo ngaphambili nangemuva. Ukuba uthelekisa nebhola lebhola le-freeride, ke le yinto emfutshane. Isimboli "FS" siya kunceda ukuhlula kwabanye.
Ebhodi ye Freeride
Kude, kwaye kunzima kuneleyo yangaphambili. Ngaphambi kokuba uthenge le bhobho yebhola, kubalulekile ukuqwalasela ukuba isikhulu sogonyamelo kuyo sitshintshile - sisemva nje. Ingaba yimiba emibini: nzima okanye ephakathi. Phakathi kweentlobo ezininzi zeebhodi zebhola uyayichaza ngophawu "FR".
Ngokuqinisekileyo awuyikuphosakela nantoni na. Into into yokuba i-snowboard yokudweba ide kakhulu kwaye ide kunezo zangaphambili. Ukongezelela, impumlo yakhe inqunywe, eyenza sikwazi ukulawula ukunyakaza kwanejubane elikhulu. Eli libhodi elinzima kakhulu, elihluke ngokukhawuleza, elisezingeni eliphezulu. Ihlonywe ngophawu "FC".
Yintoni ekufuneka uyibuke xa ukhetha i-snowboard
Khumbula, kwisigaba sokuqala akudingeki ukuba uvale ikhanda lakho ngemigangatho yobugcisa. Kubalulekile ukubeka ingqalelo into ephambili:
Ubumnandi okanye ubunzima
Ubungakanani kufuneka bakhethwe ngokuhambelana nokukhula. Ukwenza oku, jonga kwitafile ekhethekileyo, fumana ubude bakho kunye nobukhulu obufanelekileyo kakhulu bebhola lebhola.
Nangona oqalayo kufuneka aqonde ukuba ukukhawuleza kwebhola lebhola lixhomekeke ekuqineni kwalo. Ukugqithisa ibhodi ngakumbi, kulula ukufumana isivinini kwaye kulula ukujika. Kukholelwa ukuba ibhodi ebunzima kakhulu yokudweba, kunye ne-softest for freestyle. Ngoko, ukhetha, ungaqala ukusuka kuhlobo lwebhodi.
Iintlobo zihluke omnye komnye kuphela kwindlela enokukhawuleza ongayibeka ngayo izihlangu zakho. Into emele ilumkiso ngokubhekiselele kwi-plastic lock. Izixhobo ezinamathele ziza kuphazamiseka ngokukhawuleza kwaye zikwazi ukudlala ihlazo elinenkohlakalo kunye nani ngexesha elingalindelekanga. Khumbula: i-fasteners kufuneka ibe yinyithi, udonga lwangemuva luyenziwe ngokupheleleyo lweplastiki eninzi, kodwa nge-insert insit, kwaye i-shoelaces ingaba yiplastiki. Qinisekisa ukuba ubeke ingqalelo kwi-platebe ephakamileyo, kufuneka ibe yinyithi kuphela.
Eyona nto iphezulu, kunye ne-snowboard yokuthenga kunye neebhotile. Konke kuba zifuna ukuzama kunye kunye. Zifanele zigcinwe ngokukhuselekileyo kwizibophelelo kwaye zibe ngokusemthethweni kumlenze. Kufuneka uzive ukhululekile kwaye ukhululeke kuzo.
Emva kokuba ukhetha i-snowboard, ungaqhubeka nokukhethwa kwezixhobo, okuyiyona nkalo ebalulekileyo.
Indlela yokukhetha i-snowboard yokuqala-ividiyo
Ufuna ntoni umququzeleli wamanzi?
I-skewers yenkukhu kunye ne-anyanisi kunye ne-zucchini
Ukulahleka kwesisindo kunye nokuncediswa kokutya ubisi
IiMatball nge mozzarella
Ummangaliso wamakhowe podberezoviki: zokupheka zokupheka kunye neengcebiso zokuvuna